Moe Kai: For people who take everything for granted
နောက်အာကစားဆောင်ထဲက တခြားကစားနည်းတွေကို လျှောက်ကြည့်တော့လဲ ခြေလက်မစုံလင်သူတွေ၊ စုံလင်ပေမယ့် ရောဂါကြောင့် သုံးမရတာတွေ၊ အသိ ဥာဏ်မပြည့်မှီဘဲ မွေးဖွားလာတဲ့ သူတုို.တွေ အားကစားနည်း မျိုးစုံမှာ သူတို.နိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြုပြီး လာယှဉ်ပြိုင်နေကြတာတွေကို ကြည့်ပြီး ကိုယ့်ဘဝကိုယ် ပြန်သုံးသပ်စရာပါ။ ကျမကိုတော့ သူတို.ကနေ ဘဝ ဥပမာများ ပေးနေ သလုိုပါဘဲ။
ခြေလက် စုံလင်စွာ မိခင်ဝမ်းထဲက ထွက်လာထဲက မိဘနှစ်ပါးရဲ. အချစ်တွေနဲ. တည်ဆောက်ထားတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ၊ မိဘနှစ်ပါးရဲ့ လုံခြုံ ပြည့်စုံလှတဲ့ ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုတွေရဲ့ အောက်မှာ ကျမ ကြီးပြင်းလာခဲ့ ရပါတယ်။ ဒါတောင် တခါတလေ ဘဝမှာ နဲနဲပါးပါးလောက် အခက်တွေ.ရင်တောင် ကျမမှာ “ငါ့ကျမှ ဘာလုို. ဒါတွေဖြစ်ရတာလဲ” ဆိုပြီး ညည်းညူပြီး ဘဝကို အပြစ်တင် တတ်ပါသေးတယ်။ “ငါ့အတွက် ငါသာလျှင်” ဆိုပြီး တွေးမိခဲ့ပြီး အဆင်မပြေတာ နဲနဲကို (Self Pity တွေနဲ.) ငါ့ကျမှ ဖြစ်ရလေခြင်းဆိုပြီး Complaint များစွာ တက်ခဲ့ ဖူးပါတယ်။
အခုတော့ ကျမသိပါပြီ။ ဒီလို ခြေလက်မစုံမလင်၊ ဘဝ အလင်းရောင်ဆိုတာ ဘာမှန်း မသိ၊ အသိဥာဏ် မမှီတဲ့ လူတွေကတောင် မညည်းမညူ လောကကြီးကို အပြစ်မြင်မနေဘဲဘဝမှာ ဒီလောက် အောင်မြင်မှုရအောင်၊ ကျိုးစားနိုင်ရင်။ ကျမတို.လုို ခြေလက်အစုံအလင်ရှိတဲ့ လူတွေကနေ လောကကြီး မတရားဘူး ဆိုတာတွေ ထုိုင်ညည်းနေမယ် အစား ဘဝ အောင်မြင်မှု တွေ ပိုလို. ဆွတ်ခူးနုိုင်အောင် အခုထက် ဆထက်တိုးလို. ကျိုးစားရပါဦးမယ်လို. ....။